निर्मला हत्या प्रकरणमा मुछिएका २६ प्रहरीमाथि यसरी गरिदैँछ छानबिन ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार निर्मला हत्या प्रकरणमा मुछिएका २६ प्रहरीमाथि यसरी गरिदैँछ छानबिन !
on: २७ आश्विन २०७५, शनिबार १४:११ In: समाचारTags: No Comments
“अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट भएको कमजोरी र भूमिका शङ्कास्पद देखिए हामी कडाभन्दा कडा कारवाही गछौं ।” आज बिहान कञ्चनपुरका सञ्चारकर्मीसँग घटनाबारे छलफल गर्दै छानबिन समितिका संयोजक प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक धिरु बस्न्यातले भने,“छानबिन टोली दिनरात नभनेर अनुसन्धानमा खटिएको छ ।”
२७ आश्विन २०७५, शनिबार १४:११